World Chef 1.34.18 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 1.34.18 လွန်ခဲ့သော 1 ပတ်က
Application များ ဖျော်ဖြေရေး World Chef
World Chef ၏ ဖော်ပြချက်
December 28th - January 6th. Get our Google Play Year-End Deal: Never-before seen combo packs of Gems or Gold + an exclusive Christmas decoration with amazing discounts!
World Chef အတွက် အသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
World Chef အပေါ် ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
World Chef အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
World Chef အား အချက်ပြပါ
social-point စတိုး 4.05k 559.18k
World Chef နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
APK အကြောင်း World Chef အချက်အလက်
APK ဗားရှင်း 1.34.18
ကိုယျရေးလုံခွုံမှု မူဝါဒ http://www.socialpoint.es/privacy_policy/
Release date: 2018-03-10 11:05:43
လကျမှတျ SHA1: 8A:4F:89:57:3D:3E:57:80:52:B6:80:7E:EC:84:A1:D3:CA:0F:32:8C
ထုတျလုပျသူ (CN): socialpoint
အဖှဲ့အစညျး (O): socialpoint
World Chef APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ